Bulchiinsi Finfinnee Haarofni Saamicha Lafaa fi Hannaa Manaa Saaxile - ETHIOPIANS TODAY
Akka Adde Adaanech ibsanitti, manneen waliinii 21,695 akka saamame bira gahameera. Manneen woliinii yookiin kondominiyeemiin kumni 21 ol saamame kun maallaqa namoonni mana barbaadan qusataneen ijaarame. Saamtonni kan saaman maneen woliinii qofa osoo hin taane, manneen gandaas 14,641 saamaniiran. Lafti heektaarri 1,338 saamamuusaa qorannoon adda baafameera. Gama biraatiin ammoo gamoolee abbaa hin qabne 322 qabameera.
Akka Adde Adaanech baldhinaan ibsanitti, saamicha lafaa ilaalchisuun qorannoon kan irratti taasifame saamicha lafaa bara 1997-2012 jiddutti taasifamerratti. Lafti kun bifa kamiin qabame? Eennutti qabate kan jedhurratti namoonni ragaa yoo qabaatan waamichi godhameefii ture. “Yoo tarii seera qabeessa ta’an maaliif ijaarsa irratti akka hin jalqabinis gaafannee, lafa dhaabbilee amantaatiin qabameen ala abbaa irraa dhabne” jedhan Adde Adaanech.
Akka ibsa kanaatti, saamicha lafaa irratti kan hirmaatan: namoota dhuunfaa, qaama mootummaa wajjiin hidhata uummachuun dallaalonni, abbootiin qabeenyaa fi manneen amantaa gara garaati. Lafa maqaa manneen amantaatiin qabamee fi mandara hundeeffameen ala lafti jiru gara baankii lafaatti akka deebifamu taasifameera. Kanumarraa ka’uudhaan lafti hektaarri kumni tokko oli yookiin kaaree meetirri miliyoona tokkoo oli gara baankii lafaatti deebi’ee galii ta’eera.
Saamicha kanaan wolqabatee ammoo mandaroonni 64 hundeeffameera. Mandaroota 64 kana keessatti manneen kumni 79 ijaatameera. Bakkeewwan kana keessas namoonni kumni 200 oli akka jiraatanis waan barameef yeroodhaaf mandaraa fi manneen kana diigutti hin seenne jedhan Adde Adaanech ibsa isaaniitiin. Xumumura ibsa isaaniirratti, lafti Finfinnee kun akka lammata hin saamamneef hawaasni eerumsa kennuun lafa saamicha irraa akka baraaru Adde Adaanech dhaamsa gama isaanii dhaamaneeran.